प्रश्न – Himalaya Television
यस्ता छन सर्वोच्चलाई प्रचण्डले सोधेका आठ प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ चैत २०७७ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनमा अदालतलाई आठ वटा प्रश्न सोध्नुभएको छ । प्रचण्डले सोधेका प्रश्न के के छन् त हेरौं । पहिलो प्रश्न नाम मिल्दो जुल्दो छ, छैन ?...
के विप्लवले भोलि यी प्रश्नको जवाफ देलान् ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२० फागुन २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव झण्डै तीन वर्षपछि भोलि भूमिगत जीवन छोडेर सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने सरकारसँगको सहमतिपछि विप्लव सार्वजनिक हुन लाग्नुभएको हो । तर सार्वजनिक समारोहबाट विप्लवले...
खेल क्षेत्रका प्रश्न प्रधानमन्त्रीका प्रतिप्रश्नै प्रतिप्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ माघ २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले आज खेलकूदसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल क्षेत्रबारे आफ्नो धारणा राख्नुका साथै सहभागीबाट केही लिखित प्रश्न पनि लिनुभयो । र, त्यहाँ भएको सवाल जवाफले मुलुक कसरी चलिरहेको...
बालबालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे यस्ता प्रश्न (भिडियो)
१७ पुस २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज, बालबालिकासँग करिब दुई घण्टा बिताउनु्भयो । स्काउटले नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बालबालिकाले प्रधानमन्त्रीसँग रमाइला प्रश्न गरे । हेरौं बालबालिकाका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ । देश कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ...